Dib u dhac ku yimid Shirkii Muqdisho [Maxaa sababay?] | KEYDMEDIA ONLINE
Dib u dhac ku yimid Shirkii Muqdisho [Maxaa sababay?]
Rooble ayaa ka maqan dalka, isagoo mudo saddex maalin ah safar ku jooga dalka Masar, oo casumaad uu ka helay El-Sisi.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa dib u dhac ku yimid Shirka Gollaha Wadatashiga Qaran ee doorashooyinka, kaasoo la filayay inuu Maanta ka furmo magaaladda Muqdisho.
Sababta baaqashadda ayaa ah inuu Ra'iisul Wasaare Rooble ka maqan yahay dalka, oo uu booqasho wali ku joogo Masar iyo Madaxda Maamul Goboleed oo Muqdisho soo gaarin.
Ujeedka Shirka oo uu iclaamiyay Rooble ayaa ah in Madaxda ay uga tashadaan doorashadda Aqalka Hoose, dhaqaalaha dowladda ka dalbatay Beesha caalamka oo aan weli la helin iyo amniga goobaha lagu dooranayo Xildhibaanada.
Doorashadda Soomaaliya ayaa sanadkan noqotay mid laga sii rajo-dhigayo, iyadoo qaabka ay ku socoto ka muuqdo habacsanaan, caajis iyo wadashaqeyn la'aan, waxaana weli la xalin khilaafka gudiga Somaliland iyo Gedo.
Dib u dhaca ka jira jadwalka doorashadda, ayaa marba marka ka damabeysa sii daba-dheeraanaya, waxaana suurta-gal ah inay gaarto sanadkan soo socda, hadii aan wax iska-bedelin xaaladda jirta.
Illaa hadda, waxaan la dhameytirin doorashadda Aqalka Sare oo 54 kursi ka kooban, iyadoo HirShabeelle aysan ka billaaban doorashadda, waxaana sidoo kale kuraas ku harsan tahay Jubbaland iyo Galmudug.
Doorashadda Soomaaliya waxaa jihada ka lumiyay Farmaajo, oo waqtigii loogu diyaar-garoobi lahaa ku lumiyay dagaal siyaasadeed oo dantiisa ku jira iyo ka shaqeynta mudo-korarsigiisa.
Sacuudiga oo bedelay qorshaha RW Rooble iyo Madaxda Maamul Goboleedyada ee ahaa inay Shir isagu yimaadaan Maanta Muqdisho kadib markii loo soo diray dhamaantood Casuumaad.
Dahaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga, Maxamed bin Salmaan, ayaa casuumaad rasmi ah u soo diray Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo Madaxweynayaasha Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka, waxaana la filayaa in ay maalmaha soo aaddan u socdaalaan Riyaad.
U jeedka casuumaadda boqortooyada ayaa la rumeysan yahay in uu salka ku hayo dano siyaasadeed oo ku wajahan xiriirka diblumaasiyadeed ee labada dal oo aad u liitay afartii sano ee Farmaajo Madaxweynaha ka ahaa Soomaaliya.
Sida ay dhawaan howlwadeenno ka tirsan xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha u sheegeen Keydmedia Online, Sacuudiga ayaa joojiyay lacag gunno ah oo uu hore ugu kaabi jiray miisaaniyadda Dowladda, taas oo sanadkaan la qorsheynayay in lagu daro lacagta doorashooyinka.